Studies in France - INSTITUT FRANÇAIS de BIRMANIE | INSTITUT FRANÇAIS de BIRMANIE
Home » Studies in France - INSTITUT FRANÇAIS de BIRMANIE
You want to study in France or inaFrench-speaking country?
Ouverture de la campagne des bourses pour l’année universitaire 2017-2018 pour la France du 27 mars au 30 avril 2017 (enseignement en français & anglais). Trouvez ci-dessous les formulaires de candidature pour votre demande de bourse pour l’année universitaire 2017/2018. Si vous souhaitez étudier en français, veuillez rédiger votre projet en français.
Application for 2017-2018 scholarship for higher studies in France (teaching in french&english) are open from 27 March to 30 April 2017. Find below application form to support your project. If you wish to study in English, please write your project in English
STUDY IN FRANCE SCHOLARSHIP APPLICATION
1/ Définir mon projet (formulaire ci-dessous)
Scholarship application – Defining your project
2/ Trouver ma formation (lien ci-dessous)
3/ Remplir ma candidature + CV
Demande de bourse 2017 – français
4/ Contacter l’université (formulaire ci-dessous)
Scholarship application – Uni contact email V2
5/ Envoyer ma candidature à : highereducation.ifb@gmail.com
Scholarship fund 2017 2018
Contact for details : highereducation.ifb@gmail.com
1/ Define your project (form below)
2/ Find your course in France (link below)
3/ Fill in the appplication form + CV (French/English)
Scholarship application form 2017 – English
4/ Contact the university (form below)
5/ Send your application to : highereducation.ifb@gmail.com
Deadline : 30th April 2017
1/ For the quality of its system of higher education
2/ For this affordable education cost
In France, the government finances the cost of education – an average cost of €10,000 per student per year.
3/ To experience the unique French “art of living”&international environment
France is the leading tourist destination in the entire world with 80 millions of tourists per year!
Its health-care and transportation systems are second to none. France is alsoasafe and tolerant country.
Each year more than 278,000 international students choose France for their higher education. 12% are international students in French universities.
4/ For the country’s advanced economy
A major force in the world economy. 39 French companies figure among the 500 largest in the world.
5/ For the study & work experience
The law allows students to work 964 hours inagiven year, which corresponds to 60% of full-time employment for the year.
How to apply to studies in France?
To study in France and apply to French language higher education programs, you need to have the French Diploma DELF B2. The IFB team is also here to help you at every step of the way and offers to:
Learn more about French diplomas
1/ Inform you about higher education in France
Etudier en France/Campus France
2/ Guide you selecting institutions and programs
Find your training/Campus France
3/ Assist you with admissions and visa applications and prepare you forasuccessful stay in France
Prépare ton séjour/Campus France
Learn more about French studies in Myanmar
Click here to knowabit more about the French Institute and our classes
For further information and to help you choose your education program, please contact us @ contact@institutfrançais-birmanie.com
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ဒါမှမဟုတ်ပြင်သစ် စကားပြောတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ ပညာသင်ကြားလိုပါသလား။
ဘာ့ကြောင့် ပြင်သစ်မှာ ပညာသင်မှာလဲ။
1/ ၁။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးစနစ်၏ အရည်အသွေး
ပြင်သစ်အဆင့်မြင့် ပညာရေးစနစ်ဟာ ကျောင်းသားအားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့ ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးတွေ ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးက အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။
ပြင်သစ်မှာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို အစိုးရကထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပညာသင်စရိတ်ဟာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် ယူရိုငွေ တစ်သောင်း ရှိပါတယ်။
3/၃။ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ အနုပညာ နှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း
ပြင်သစ်နိုင်ငံဟာ တစ်နှစ်လျှင် နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်ပေါင်း သန်း(၈၀) နဲ့ ကမ္ဘာအဆင့်လည်ပတ်မှုနေရာ ဒေသများ ထဲမှာ ထိပ်ဆုံးနေရာကိုယူထားပါတယ်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း တွေကလည်း နောက်ကျကျန်မနေခဲ့ပါဘူး။ နောက်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရမှု၊ မျှတမှုရှိတဲ့နိုင်ငံ လည်းဖြစ် ပါတယ်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာ ၂၇၈ ၀၀၀ အရေအတွက်ရှိနိုင်ငံတကာမှကျောင်းသားများဟာ သူတို့ရဲ့အဆင့်မြင့်ပညာရေး အတွက် ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ကြပါတယ်။ ၁၂% ရှိနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများက ပြင်သစ်တက္ကသိုလ်များ မှာ ပညာသင်ကြားလျက်ရှိပါတယ်။
4/၄။ တိုးတက်မှုရှိသော တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးရေစီး
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးမှာ အရေးပါအရာရောက်တဲ့ အင်အားတစ်ခု၊ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးအုပ်စုတွေထဲ (၃၉) ခုဟာ ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ပါတယ်။
5/ ၅။ ပညာသင်ယူမှု နှင့် အလုပ်အတွေ့အကြုံ
နိုင်ငံတကာမှကျောင်းသားများဟာ အမျိုးသားအဆင့်ကျောင်းသား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် ကျောင်းအပ်နှံထားပါက ပညာသင်ယူနေစဉ်အတောအတွင်း အလုပ် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေပြဌာန်းထားတာကတော့ ကျောင်းသားများဟာ စာရင်းသွင်းထားတဲ့ နှစ်အတောအတွင်း နာရီပေါင်း ၉၆၄ နာရီ အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး ၎င်း ပမာဏက အချိန်ပြည့်အလုပ်ရဲ့ ၆၀% နဲ့ညီမျှပါတယ်။
ပြင်သစ်မှာ ပညာသင်ယူဖို့ဘယ်လို လျှောက်ထား မလဲ။
ပြင်သစ်မှာပညာသင်ယူဖို့နဲ့ ပြင်သစ်အဆင့်မြင့်ပညာရေးအစီအစဉ်တွေကိုလျှောက်ထားနိုင်ဖို့အတွက် သင် DELF B2 ဒီပလိုမာကိုရယူထားဖို့တော့လိုပါတယ်။ ပြင်သစ်စာ DELF-DALF စာမေးပွဲများနှင့် ပြင်သစ်စာစွမ်းရည်အဆင့်များအကြောင်းလေ့လာရန်
Campus France နှင့် IFB တို့မှ ဆောင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများကို ကူညီလမ်းညွှန်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
2/ ကျောင်းများနှင့် ပညာရေးအစီအစဉ်များကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ရန်
3/ ၀င်ခွင့်နှင့်ဗီဇာလျှောက်ထားမှုများအစရှိတဲ့ ပြင်သစ်မှာအဆင်ပြေပြေ၊ အောင်အောင်မြင်မြင်နေနိုင်ရေး အတွက် ကူညီပေးနိုင်ရန်
ERASMUS ပညာသင်ဆုများ ကိုအားလုံး ပါဝင်လျှောက်ထားလိုက်ကြရအောင်။
ERAMUS MUNDUS ပညာသင်ဆု၊ IMPAKT စီမံကိန်း
ပညာရေးနှင့် ဗဟုသုတဖလှယ်ရေး အတွက် နိုင်ငံတကာရွေ့လျားသွားလာရေး အစီအစဉ်
ERAMUS MUNDUS IMPAKT အစီအစဉ်ဟာ Universite de Rouen မှအဆိုပြုတင်သွင်းသော အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Master နှင့် ဒေါက်တာဘွဲ့များအတွက် ပညာသင်ဆုများလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ (ပိုလန် ၊ ဂျာမနီ ၊ ပေါ်တူဂီ ၊ စပိန်၊ အီတာလီ နှင့် ဘယ်လ်ဂျီယံ အစရှိတဲ့တခြားသော ဥရောပတက္ကသိုလ်များမှာ လည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။) လျှောက်ထားနိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေကတော့-
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်အတွက်သွားရောက်နိုင်ရန် မြန်မာကျောင်းသားများအနေဖြင့် ၂၀၁၅၊ မတ်လ ၂၂ ရက်အထိ နောက်ဆုံးထားလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
ပါဝင်နိုင်တဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအဆင့်တွေကတော့ မိတ်ဖက်တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ ပညာသင်ဆုတွေနဲ့ လျှောက်ထားရမယ့်နည်းလမ်းပုံစံတွေအတွက် – www.impakt-asia.eu ( ASIS-EU MASTER- pdf ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။)
B1 နှင့် B2 အဆင့်ရှိကျောင်းသားများသာလက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။ ( Universite de Rouen တစ်ခုတည်းမှသာ)
Master ပညာသင်ဆုအတွက် လစဉ် ယူရို ၁၀၀၀ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ကာလကတော့ (၁၀) လဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်စရိတ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ လျှောက်ထားဖို့ရက်အနည်းငယ်ပဲကျန်ပါတော့တယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် သင့်ရဲ့ပညာရေးအစီအစဉ်တွေရွေးချယ်ဖို့အတွက် contact@institutfrançais-birmanie.com မှာစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။